Laure na SEKEAD SEO Otu Di na Nwunye
ANYỊ BỤ GOOGLE.
Na-eme Ka Ọganihu Gị
Na Master SEO Consulting Services
On / Gbanyụọ-Page SEO
Ihe ị na-eme ma gbanyụọ na ibe ahụ na-emetụta ụzọ ụgbọelu ọchụchọ. Anyị ga-enyere gị aka ịkwọ ụgbọala na-edu site n'ịhụ na weebụ maara na azụmahịa gị bụ ihe ịga nke ọma.
Anyị na-eji ihe ndị eji eme ihe ntanetị iji jupụta n'ime nchọpụta isiokwu iji jide n'aka na ị na-ekepụta ọdịnaya nke na-ejikọta na ndị na-ege gị ntị na ịkwọ ụgbọala.
Jụọ onye ọ bụla SEO na ọ ga-agwa gị njikọ ụlọ bụ akụkụ kachasị ike nke njikarịcha. Anyị maara otú ị ga-esi gbasaa ikpughe gị site na ịkwọ ụgbọala ndị na-ezigara njikọ ziri ezi.
Anyị wuru oriri na-ewu ewu na blog njem "A Di na Nwunye" site na ala - na-eji ihe ọmụma miri emi banyere otú Google si arụ ọrụ iji nweta ihe ịga nke ọma na ịchọpụta ọtụtụ puku mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ anyị kwa ụbọchị.
Ị na-achọ ime otu ihe ahụ maka azụmahịa gị?
Anyị SEO Adreesị Ije Ozi, ị ga-eme ka ị nwee onwe gị site n'inweta azụmahịa ị! Lelee azụmahịa gị gbawara mgbe na-eduga na atụmanya ìgwè ewu na atụrụ gị website!
Justin na Tracy
Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ede blọgụ, azụmahịa, ma ọ bụ onye na - azụ ahịa n'ógbè - ụkpụrụ nke ịchọta okporo ụzọ okporo ígwè bụ otu. Anyị ejirila ọtụtụ afọ mụta ihe ma mezuo ọrụ SEO anyị mgbe anyị na-ewu A Di na Nwunye, nke taa na-enweta ihe karịrị 40,000 ọbịa kwa ọnwa!
Chọrọ ime otu ihe ahụ na azụmahịa gị? Na-achọ ọhụrụ edu na ikpughe?
Pịa n'okpuru ebe a ka ịmepụta ndụmọdụ na-enweghị isi taa!
Ihe niile ị chọrọ ịzụlite okporo ụzọ na-eweta ọganihu.